XOG: Gaarigii lagu weeraray Xalane oo uu lahaa wasiir ka tirsan DF (Shaki jira) - iftineducation.com
iftineducation.com – Warar ka imanaya Xarunta Madaxtooyada Somalia, ayaa sheegaya in Madaxda DF Somalia ay aad u hadal hayan warar sheegaya in gaarigii lagu galay Xarunta Ciidamada AMISOM ee Xalane uu ahaa nooca aysan karin rasaasta.
Gaariga ayaa sidoo kale la sheegay inuu lahaa Wasiir ka tirsanaa Xukuumadii kalsoonida lagala laabtay ee Cabdiweli Sheekh Axmed, waxaana baaritaano arrintaasi la xiriirta wada Madaxda dalka oo tiro koobyo ku bilaabay gaadiidka ay leedahay DF.
Gawaarida aysan xabadda karin ayaa waxaa haysta kaliya wasiirada DF, waxaana la isku dayayaa in la ogaado wasiirkii lahaa baabuurkii shalay.
Taliska sare ee Ciidamada AMISOM ayaa madaxda Qaranka ku war-geliyey in gaarigii shalay lagu soo weeraray uu ahaa nuuc aysan xabadda karin.
Madaxweyne Xasan ayaa amar ku siiyey hay’adaha Ammaanka iyo Agaasimaha Madaxtooyada inay cadeeyan cidii laheyd gaariga islamarkaana tiro koob ku sameeyaan gabi ahaan gaadiidka dowlada.
Arrintaani ayaa waxa ay shaki ka dhex dhalisay Madaxda dalka iyo Talisyada ajaanibta ee ku sugan Xarunta Xalane kadib markii DF Somalia.
Afhayeen u hadlay Alshabaab oo lagu magacaabo Cabdicasiis Muscab ayaa sheegay in weerarkaasi ay qaaden Dagaalyahaano ka tirsanaa Alshabaab oo bartilmaameysanaayay Saraakiil Afrikaan iyo Cadaan ku sugnaa Xirada oo xiligaasi ku howlanaa Munaasabada ciidda masiixiyiinta ee Kirismaska.
Shabaabkii weeraray Amisom Oo nolosha lagu qabtay iyo Faah-faahin kale – Daawo